TRUTH AND PEACE: သာသနာတော်အရေးတွေးပေးပါ(၂)
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 29.1.08
သာသနာ ကို ကိုယ်ပိုင်လို ကျင့်ကြံ နိုင်မှ သာသနာကြီး တည်တံ့ ပါမယ် ... ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြပါ :D
ဗုဒ္ဓမြတ်ဘုရားက သုတ်တန်တစ်ခုမှာ ညွှန်ပြတာက
ခိုးတဲသူတွေများလာရင် သူခိုးရန်ကို ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့ တုတ်ဓါးလက်နက် ဆောင်ကြလိမ့်မယ်တဲ့။
တ်ုတားလက်နက်ဆောင်လာကြရင် သတ်မှု ဖြတ်မှု တွေဖစ်လာပြီး လောက ကြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာမှုပျက်ပြားမယ်တဲ့။
ဒါတော့ စားစရာ ရှိအောင်အရင်လုပ်ကြရမယ် ဆိုတယ်။
သဗေ`သေတ္တာ အာဟာရဌိတိကာ လို့ ဘုရားရှင်က သတိပေးထားတော်မူတယ်။
သာသနာတည်တံ့ဖို့အတွက် ပရိတ်သတ် ၄ ပါး က ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရာမှာ...ငွေအရေးကြီးတယ်။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က စပီရီကျူရယ် ဒီဗလော့မင်း တစ်ခုထဲ
အင်ဇာဆိုက် လုပ်ပြီး ဟောပြထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်
အဲဒါကို လစ်လှူရှုထားတဲ့ တို့နိုင်ငံမှာ...စားစရာ
ငွေပေးစည်းရုံး၊ အကြိုက်ပေး အလိုက်ပေးစည်းရုံးကြတဲ့အတါက်..အဲဒါကို ဘာနဲ့ကာကွယ်ရမလဲ။
သူတို့လိုချင်တာ တရားသဖြင့် ပေးနိုင်ရင်....ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာဆိုတာ တည်တံ့လာဖို့ဖြစ်မှာပဲ။
စားဝတ်နေရေးဖူလုံညြ့်စုံတဲ့ စင်ကာပူလို နေရာမှာ.
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ. ခိုးယူတာမျိုး က ဗုဒ္ဓတရားထွန်းကားပါတယ် ဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်ထက် များစွာ လျော့နည်းနေတာဟာ..ဘာကြောင့်လဲ..
အတိတ်က တို့မော ဟာ ချမ်းသာတယ်။ တစ်မိုးလုပ်ရင်
ဒါတော့ အဲဒီခေတ်အချိန်အခါက စပီရီကျူရယ် ဒီဗလော့မင်း ကို အင်ဖါဆိုက် လုပ်နိုင်တာ အံ့သြစရာမဟုတ်ဘူး။
ခုခေတ်မှာ လူငယ်တွေက ဆင်းရဲမွဲတေနေတာ ဟာ
ဗုဒ္ဓဘာသာအဆုံအမ ကြောင့်ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး လက်ညိုးထိုးနေကြတာ သတိပြုဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဒါတော့ စီစတန်မက်တိကယ်လီ စတက်ဘိုင်စတတ်ဘိုင် စတတ် သွားမှ ဖြစ်မယ်။ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင်က လည်းငါ့ဘုရားရဲ့ ၀ါဒ ဟာ ဖားဝါဒမဟုတ်ဘူး။ ဖားခုန်သလို ဟိုခုန်ကျော် ဒီခုန်ကျော် လို့ရတဲ့ ၀ါဒ မဟုတ်ဘူးလို့ သုတ်တန်တစ်ခု မှာ သတိပေးထားခဲ့ဘူးတယ်။
ဒီတော့စားစရာ မရှိရင် စားစရာ ဖူလုံအောင် အရင်လုပ်မှဖြစ်တော့မယ်။ စူဠ၀ါ မဟာဝါ ပါဠိတော်
မှာ ဘုရားရှင်က .
၀တ္တံ အပရိ ပူရန္တော သီလံ နပရိပူရတိ ..စသည်ဖြင့် ၀တ်ကြီးဝတ်ငယ် မကျေပွန်ရင် သီလဖြည့်ကျင့်သည်မမည် လို့ ဆုံးမထားပါတယ်။
၀တ်ကြီးဝတ်ငယ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ..။ မိဘ ၀တ်.သားသမီးဝတ် ဆိုတာတွေ ဘေးချထား..
ဒီထေရ၀ါဒ သာသနာ န်ြမာပြည်မှာ ပျောက်ကွယ်တော့မည် ဟု သာ
စားဝတ်နေရေး ကုံလုံပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာသာ သူတော်ကောင်းတရား ကျင့်ကြံရန် လွယ်ကူကြသမို့
သာသနာတော်ကြီး ရွေ့နေပြီလို့ ဆရာတော်ကြီးများက
မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီးက ..သာသနာတော်ကြီး ၀မ်းလျောမလို့ ၀မ်းရောင်နေတာ တဲ့.... မှတ်သားမိတာလေးများ ကို ဝေဖန်ဖို့ ဝေငှလိုက်ပါတယ်။